वेब डिजाईन - कर्णाली रिसोर्स म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ्ग सेन्टर प्रा. लि.
वेबसाइट वेबपृष्ठहरूको एक समूह हो जुन एक अर्को पृष्ठसँग जोडिएका हुन्छन्। कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि वेबसाइट एक प्रकारको इन्टरनेटसँग जोडिएको कम्प्युटरबाट खोलेर हेर्छन। वेबसाइटहरू इन्टरनेट भएका माेबाइल फाेन अथवा टेलिभिजनबाट पनि हेर्न सकिन्छ। वेबसाइटहरू कम्प्युटर वेबसर्भरको मद्दतले खोलिन्छ। अहिले नेपालमा पनि वेबसाइटको विकास बढ्दो क्रममा छ। बिश्वको एक परिक्षणले जनाएको छ, विश्वको हरेक व्यवसायको बजारीकरण तथा लाभमा ५०% भन्दा माथि वेबसाइटको भूमिका हुन्छ।
व्यवसायको लागि वेबसाइट
हालै नेपालमा पनी अनलाईन मार्केटिङ संचालन बढ्दो क्रममा छन्। युवा पुस्ताले नेपालमै बसेर सानो लगानी देखि घर देखि नै यो व्यवसाय सुरु गर्न सकिन्छ। जसको लागि एउटा ई-कमर्स वेबसाइटको आवस्यकता पर्द छ। भने विभिन्न अन्य व्यवसायीले पनि वेबसाइटदेखि आफ्ना उत्पादनको जानकारी तथा बिज्ञापन गरेर ब्यापारको प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ। समाचार, व्यक्तिगत, शिक्षा तथा अन्य वेबसाइट देखि पनि लोकल बिज्ञापन तथा अनालईं बिज्ञापन राखेर आम्दामी गर्न सकिन्छ। नेपालमा पनि अहिले समाचार तथा अन्य वेबसाइट देखि निकै मुनाफा कमाएका वेबसाइटहरू छन्।
वेबसाइट निर्माणमा हाम्रो सेवा
हामी तपाईको व्यवसायिक क्षेत्रमा डिजिटल गराउन वेबसाइट निर्माण सेवा संचालन गरेका छौ। वेबसाइट निर्माण गर्नु मात्र होईन कि हामी निर्माण पश्चात पनि सेवा प्रदान गर्ने छौ। आकर्षक, सुपर स्पिड, एस.ई.ओ., मोबाईल फ्रेन्डली, प्रिमियम र क्लाउड एस.एस.डि. होस्टिंग प्रदान गर्द छौ। हामी सबै किसिमका वेबसाइट तथा मोबाईल एप निर्माण गर्दछौ। सरकारी तथा गैरसरकारी सस्थाको ब्लग तथा पोर्टफोलियो तयार पार्छौ। र कुनै पनि वेबसाइट अपडेट तथा परिमार्जन पनि गर्दा छौ। हामीले निर्माण गरेका सबै वेबसाइट मोबाईल फ्रेन्डली र एस.ई.ओ. तयार रहेका छन्। समाचर तथा अन्य वेबसाइटको लागि बिज्ञापन राख्ने प्रसस्त ठाउँ प्रदान गर्दछौ। र वेबसाइट सम्बन्धि सम्पूर्ण तालिम पनि प्रदान गर्दछौ।
वेबसाइट र मोबाईल एप बिकास
अहिलेको युग आधुनिक तथा डिजिटल युग हो। अहिले हरेक मान्छेको हातमा मोबाईल तथा ल्यापटप हुन्छ। अहिले मान्छे नयाँ कुरा को बारेमा जानकारी एक क्लिकमै सेकेण्डमै ईन्टरनेटबाट पाउन सक्छ। जसको लागि गुगलले कुनैन कुनै वेबसाइट संग फिल्टर गरि सूचना प्रदान गर्दा छ। हामी पनि एउटा वेबसाइट बनाई सूचना तथा सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ। जसको लागि वेबसाइट तथा मोबाईल एप आवश्यकता पर्दछ। हामी हाम्रा सम्पूर्ण महानुभाबलाई सुपत मुल्यमा वेबसाइट तथा एप विकास गर्दछौ।
हाम्रा दैनिक तथा साप्ताहिक तालिममा सहभागी
बन्न तल बाट निबेदन गर्नुहोस